लाखौं कमाउने एउटा त्यस्तो उत्साह बोकेर, भबिस्यको बिलासी जिवनको कल्पना गर्दै, इष्टमित्र नाता गोता, आफ्नै अनि स-परिवारको ठूलो अपेक्षा मिश्रित ठूलो गह्रौं भारि बोकेर इन्छन एयरपोर्टमा पाइला टेक्दैछु मात्रै मजदुरको रूपमा । हुनत, जिन्दगीको गती कहाँ गएर ब्रेक लगाउनु पर्ने हो थाहा छैन तर पनि आज अत्यन्तै खुसी छु कि मेरो सपना को देशमा पाईला टेक्दैछु।
यो देश त्यति सजिलो छैन जति तिमी सोच्दै छौ भन्ने पनि नसुनेको होइन । तैपनी एउटा बलियो आत्म बल बोकेर मुठ्ठीले ढुङ्गा फोड्ने गति`लो अठोट बोकि वर्त`मान बेचेर भविस्य किन्ने दृढ़ संकल्पका साथ झर्दैछु कोरिया। भौतिक सुख`भोग के हो त भन्ने आभास कोरिया झर्ने बित्तिकै भइहाल्यो। प्लेनबाट झर्ने बित्तिकै रेल चढेर इमिग्रेश`नको लाईन सम्म पुग्नुपर्ने जबकी मेरो देशमा मैले रेलनै देख्न पाईनँ।
इमिग्रेशन पार गरि`सकेपछि इपिएस नेपाल लेखेको ब्यानर सहित उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिले लाई`नमा बस्न आग्रह गर्नु भयो। हामी लाईन लगाउन अत्यन्तै सिपालु भइ सकेका थियौं। किनकी ऊ बेला भाषा परीक्षामा लगाएको लाईन भन्दा अत्यन्तै शभ्य भद्र पारामा अनुशासनको भरपुर पालना गर्ने सिपाही जस्तै भइसकेका थियौं। लाईनमा नेपाली प्रतिनिधिले करिब तीन पटक सम्म दोहोर्याई दोहो`र्याई गनेपछि निस्कने संकेत भयो।
अन्तिम गन्तव्यको पर्खाई अझै लामो हुने पक्का छ। रातिको १२ बज्दैछ ब्याग एकै ठाउँमा राखेर के हान्यो पत्तो भएन तर स्प्रे चाहिँ हो तर के को त्यो पनि पत्तो भएन। त्यसपछी एउटा सु`विधा सम्पन्न बस चढाएर करिब ५/७ तले भवन|सम्म आ`ईपुग्दा १ बजिसकेको थियो।
निद्राले आकुल`व्याकुल भए पनि त्यो बिचमा पर्ने भौति`क बस्तु जो मानव निर्मित थिए तिनैले निदाउन पटक्कै दिएनन्। बिहान ६ बजे लाईनमा उपस्थित हुने त्यसपछि खाना खा`ने र क्लास लिने भनेर नेपाली प्रति`निधिले जान`कारी दिँदै आ-आफ्नो सिट प्लानिङ अनुसार सुत्न जान भन्दै बिदा हुनुभयो। हामी रुम खोज्न ला`गियो सिट प्लान हेरियो र लिफ्ट चडेर चौथो तलाको ४०७ नम्बर कोठा`मा पुगियो।
बिहान फ्रेस हुने क्रममा शौचालयमा पा`नीको भाडा देखिएन अचम्म लाग्यो अब के गर्ने ? धन्न नोटिस राखिदिएको रहेछ दिशा टिस्यु पेपरले पुछेर टोकरीमा हाल्नु भनेर नेपालीमा नत्र के गर्नु गर्नु… फ्रेस भएर लाईनमा लागियो र सुरू गरियो छातिमा हात राखेर राष्ट्रिय गान गाउन सयौं थुङ्गा फुलका हामी…
त्यस पछि खाना खाने लाईन एउटा थाल दुइटा चपिष्टिक र एउटा चम्चा समाइयो र खाना क्रमशः निकाल्दै थाल भरियो। खा`ली टेबलमा राखेर बस्दै गर्दा नाकले त्यो को`रियन खा`नाको पहिलो टेस्ट लिएछ यो खाना तेरो मुख`बाट जाला जस्तो छैन मनले पनि भन्दै छ तै पनि अबको ५ वर्ष यही र यस्तै खानामा यो जिब्रो`लाई डुबाउनु छ।
आँखा चिम्लेर खानुको बिकल्प देखि`एन तर के जान्थ्यो र `हाम्रो भुटेको तारेको टन्नै मसला हालेर खाईर`हेको यो स्वादे जिब्रोले यो उमालेको घासपात झारहरू कसरी खान्थ्यो होला र…बल्लबल्ल अलि`अलि खाएर बाँकी फालियो।
२ रात ३ दिन`को रमाईलो तर क`ष्टकर बसाई ट्रेनिङ सेन्टरमा सकेर आज तेस्रो दिन अर्थात कम्पनी प्रवेश गर्ने दिन। खबर छ आज ९ देखि १०/११बजेसम्म तिमीहरु`लाई लिन कम्पनिको सा`हुहरू आउँछन्।
व्यग्र प्रतिक्षाको लामो घडीले आ`ज विश्राम लिने `दिन भनेर सम्झिरहेको छु। भाषा परीक्षाको तयारीदेखि दिनरात देख्न थालिएको सपना आज पूरा हुँदैछ। बिहा`नको नु`हाई धुवाई पछि उहीँ ट्रेनिङ लि`एको ठूलो हलमा जम्मा हुने भनिएको छ। सबै जम्मा भैसकेका छन् करिब ५०० जनाको व्यग्र प्रतिक्षा छ।
कोरियाली नागरिक करिब ६०/७० वर्ष भनेर आफ्नो परि|चयमा उल्लेख गर्दै थियो तर देख्दा तन्नेरी ज|स्तै जस्तै लाग्नेले अगाडि पढाईरहेका थिए। उसको कुरा भन्दा` आफ्नो ध्यान साहु र कम्पनी तिर बढी छ। के काम होला? साहु कस्तो होला? नेपालीहरू छ कि छैन होला? काम गाह्रो छ कि सजिलो छ होला ? यावत कु|राहरु मनमा खे|लिरहेछ छ। मन देखि त जे ज`स्तो परे पनि काम गरिन्छ र पैसा चाहिँ कमाईन्छ भन्ने गहिरो अठोट आफैंमा छ।
कोरिएन सरले कोरिया वि`कासको बारेमा पढाउँदै छन्। यसमा ध्याना|कर्षण गराएकोले सुन्ने चेस्टा गर्दैछु। जर्मनमा रहेका कोरिएन नागरिक जो वैदेशिक रोजगारिको शिलशिलामा थिए उनैको अवस्था`बारे बुझ्न पुगेका कोरियाली राष्ट्रपति उनीह`रूको मेहनत देखेर स`बैको अगाडि डाको छोडेर रोईदिएको दृश्यले जर्मन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र जर्मनिले आफ्नो देशमा टेक्नोलोजी भित्र्याउन सहयोग गरेको कुरा गरि`रहेका छन्।
यहाँको विका`समा से माउल उन्दोङ्ग (नयाँ गाउँ अभ्यास ) अवधा`रणाको ठूलो योग`दानको व्याख्या गर्दै छन्। प्रत्येक बिहान १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिक ३० मिनेट सड`कमा झाडु लिएर निस्केका कुरा गर्दैछन्। हामी कोरियन मात्रै ४ घण्टा सुतेर २० घण्टा का`म गरेर आज यो स्थितिमा देश बनाएका हौ। अहिले यहाँ रात नै पर्दैन भन्दै छन्।
हलमा करिब ५ सय जना`को उपस्थिति छ अगाडिको पंक्तिमा करिब ३ सय जना नेपाली र पछिल्लो पंक्ति|मा करिब २ सय जना म्या`नमारी छन्। हामी रातो टोपी र निलो ज्याके`टमा छौ भने उनीहरु निलो कमिज र निलो पाई`न्टमा छन्।
बिस्तारै साहु हरू आफ्ना काम`दार लैजान प्रवेश गर्ने क्रम छ। आफ्नो साहु पनि आएको छ कि? त्यो साहु मेरो पो हो कि? यस्तै कुराले मुटु अत्यन्तै जोडतो`डका साथ ढुक`ढुक गरिरहेको छ। तर अर्को तर्फ माहोल यस्तो लागिरहेको छ कि यहीँ ठूलो दसैं लागि`रहेको छ तर हाम्रा लागि नभई यो को`रिएन साहु`हरुको लागि। हामी त मात्रै बलि चढाउन राखि`एका पर्सिएका बोका जस्तै।
अगाडिबाट नाम बो`लाउने क्रम शुरु भैसकेको छ। सा|हुलाई कसरी फेस गर्ने भनेर पहिलै सि`काइए अनुसार नाम आ`एका जतिले त्यसै गरिरहेका छन्। साहुलाई १५ प्रति`शतमा झुकेर आन्यङहासेयो गर्‍यो अनि साहुको पछि पछि लाग्यो।
माहोल बिल्कु`ल फरक ला`गेकै छैन उस्तै जस्तो टुँडिखेलमा दशैको बेलामा खसि बोका च्याङ्ग्रा बेचिन्छ। बस यहाँ यती फरक छ यहाँ जवानी बेचिएको छ।आभास यस्तै पलाई`रहेको छ मनै|देखि।
हो म को`रियामा बेचिएको छु। सर`कारले बैदेशिक रोजगारिको नाममा देशका ऊर्जावान युवाको लोभ`लाग्दो भविश्य देखाएर ऊर्जा`शिल भविस्य विभिन्न देशमा लि`लामी गरिरहेको छ…हामी पनि बाध्य छौ अभावमा अल्झेर होइन असन्तुष्टिले चिहाएर।
यहाँ सरकारले वैधा`निक तबरले लाखौं युवाह`रुको जवानी/जीवन बेच्दै आईरहेको छ शाखा खोलेर भने हामी बलि`को बोको बनिरहेका छौ। र बलिको बोको बन्न ऊर्जा थप्ने काम नै सरकार ले गरिदि`एको छ।
हामी दिनहुँ भारतका कोठिमा बेचिएका चे`लीबेटीका कुरा व्यापक सुनिरहेका छौँ तर बैदे`शिक रोज`गारिका नाममा भिन्ना खाडी मुलु`कदेखि अन्य मुलुकहरूमा बेचिएको युवा`शक्तिको ज|वानीको पीडादायी कुरा कस्ले सुन्ने? र गर्ने को? मनमा खेलिरहेको छ।
तै पनि धेरै साथीहरू सँगै आएको रमा`ईलो गरेको ती क्षण हरूपछि बिदाईको क्षण अत्यन्तै पीडा`दायी बनिदिदो रहेछ। जब मसँगै आएको र सँगै आ`डमा बसेको साथीको नाम आयो र ऊ जानुपर्ने बेला भयो ऊ बिदाईको बेला भन्दै छ- भेट त भैएलानी है! छुट्टिदा जब आँखाहरुले मात्रै डिल भत्का`एर बाहिर छतछुल्ल नभ`एका मात्रै हुन तर छ्च`ल्किनबाट जोगिन भने सकेनन्।
पीडा सायद पोखेर र लेखेर कहिलै पूरा हुँदैन।। करिब १५० जना जति पछि बेचिने नाम आयो मेरो। म पनि स`बैले जस्तै गरेर साहुँको पछि पछि लागे अनि मनमनै भने,- तँ भाग्य`मानी रहेछस् किन`की मेरो जवानी किन्दै`छस् र म अभागी रहेछु आफ्नै सहमतिमा आफैंलाई बेच्दै छु।शाभार
दक्षिण कोरियामा कहाँ–कहाँ छ पिर बिसाउने ठाउँ ?